कांग्रेस निर्वाचन : कसले जित्यो सिटौला र शर्माको जिल्लामा ?
८ मंसिर २०७८, बुधबार १:१३
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा समूहबीच टक्कर देखिएको झापाका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ।
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत झापाका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भएको हो। दुवै नेताको समर्थनबाट उम्मेदवारी दिएकाले आ-आफ्नो अडान नछाडेपछि सोमबार निर्वाचन भएको हो । पाँच निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सिटौलाले समर्थन गरेका क्षेत्र २, ३, ४ र शर्माले समर्थन गरेका क्षेत्र १ र ५ का क्षेत्रीय सभापतिका उम्मेदवार विजयी भएका छन।
क्षेत्र १ को सभापतिमा इन्द्रबहादुर बुढाथोकी निर्वाचित भएका छन। उनले गोपाल तामाङलाई हराए । सचिवमा सुरेन्द्र बुढाथोकी र गुणराज भट्टराई निर्वाचित भए । सहसचिवमा खगेन्द्र गिरी र दीपक काफ्ले निर्वाचित भएका छन।
क्षेत्र २ को सभापतिमा खगेन्द्र मैनाली निर्वाचित भएका छन। उनले शर्मा समर्थक मोहन सुब्बा लिम्बूलाई पराजित गरे। सचिवमा चन्द्रप्रसाद चुडाल र रामबाबु धिमाल तथा सहसचिवमा जीवन थापा र नगेन्द्र बस्नेत निर्वाचित भएका छन।
क्षेत्र ३ को सभापतिमा गणेश पोखरेल निर्वाचित भएका छन। उनले राजेन्द्र घिमिरेलाई पराजित गरेका हुन। घिमिरे संस्थापन पक्ष शर्मा समर्थक हुन। क्षेत्रीय सचिवमा गीताप्रसाद भट्टराई र भूपाल बस्नेत विजयी भएका छन । सहसचिवमा नारायण दाहाल र प्रकाश राजवंशी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन।
क्षेत्र ४ को सभापतिमा जयनारायण साह तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन। झापा गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका साहले नारायणप्रसाद बजगाईंलाई पराजित गरेका हुन। बजगाईंलाई शर्माको समर्थन थियो । क्षेत्रीय सचिवमा रूपनारायण खतिवडा र सुमन काफ्ले निर्वाचित भएका छन। सहसचिवमा इन्द्रप्रसाद प्रसाईं र कोषराज गड्तौला निर्वाचित भएका छन।
क्षेत्र ५ को सभापतिमा ढुण्डिराज भण्डारी पुनः निर्वाचित भएका छन। भण्डारीले रोशनकुमार गौतमलाई हराएका हुन। सचिवमा धर्मानन्द भट्टराई र मुकुन्द उप्रेती निर्वाचित भएका छन। त्यस्तै, सहसचिवमा गोपालराज दाहाल र डिल्ली चापागाईं निर्वाचित भए ।
क्षेत्रीय अधिवेशन सकिएलगतै जिल्ला अधिवेशनमा पनि नेता सिटौला र शर्मा समर्थनका दुई प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन। सिटौला समर्थकका देउमान थेबे र शर्मा समर्थकका राम कट्टेलले सभापतिमा प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन। थेबे पूर्वउपसभापति हुन भने कट्टेल वर्तमान उपसभापति हुन।
माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधि छान्ने जिम्मा प्रचण्डलाई
संस्थापन पक्षबाट कर्णाली प्रदेश सभापतिमा ललितजंग शाहीको उम्मेदवारी
कांग्रेसले ताेक्याे वडा सदस्यदेखि केन्द्रीय सभापतिसम्मकाे उम्मेदवारी दस्तुर, कसकाे कति ?
सर्वोच्चमा तोकियो सबै खाले मुद्दामा पेसी, सुनुवाइ भने भएन सुरु
कविता – जुनको माया